Nepal: Resaka Hafa Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2018 14:30 GMT
Maika ery ny tontolon'ny bilaogy ao Nepal hihaino momba ny resaka hatao tsy ho ela eo amin'ny Maoista sy ny fiarahan'ny antoko fito.
Manana tantara vitsivitsy ny United We Blog : Resadresakin'ny Maoista Momba Ny Famerenanan'ny Fananana Nalaina, Dingan'ny fandriampahaleman'i Nepal : Ny Maso Rehetra Any Amin'ny Fihaonana Goavana Amin'ny Zoma, Kotroka Lohataona Ao Nepal…Be Voninahitra Fa Tsy Nisy Vokany-II, TetiBola Nepaley: Tarehimarika Vitsy ary Tsy Fitovian-kevitra Maoista, Tafika Mahaleotena (Tafika Nepaley Mitondra Tena Tahaky Ny Governemanta Anjorony ), Tantaran'ny Tanàna Nepaley: Manidy Trano ny Maoista, Ray Aman-dreny Noroahana, Zanaka Lahy Niala tamin'ny Asan Miaramila
“Dari katera aayeko dekhda pharkelan jasto lagdaina” [Mahita azy ireo tonga manadio volombava, tsapako fa tsy hiverina eny an’ ala izy ireo.] …. ankizilahy mitondra ny anarana Aasish no nanipy an'ireo teny ireo izay tadidiko foana isaky ny mahita an'ireo Maoista sola mpitarika aho, Prachanda, Dr. Baburam Bhattarai ary Krishna Bahadur Mahara.
Namoaka antsafa roa niarahana tamin'i Dr. Baburam Bhattarai ny INSN avy tamin'ny loharano hafa. Iray amin'ny mpitarika Maoista malaza indrindra i Bhattarai.
Nitady demokrasia feno isika mba ho sitrahan'ny ankamaroan'ny vahoaka; indrindra fa ireo olona mahantra avy any ambany tanàna, vehivavy, Dalit, Olompirenena voatsindry, Madhesis… Tsy tena mafy loha sy hentitra be akory ny fotokevitray. Siansa ny fotokevitray, siansa izay mivoatra manaraka ny ilain'ny taonjato faha-21. Araky izay lazainy, tsy fotopinoana ny Marksista fa torolalana mba hihetsehana…………Tsy miankina ary novolavolaina tao an-tanàna ny fikominay na ny hetsikay. Tsy nitady fanohanana izay- na ara-batana na ara-materialy – na avy amin'iza na avy amin'iza……… Manao filazana i Etazonia – filazana tena tsy voamarina sy mahatalanjona -…… Niova ny toejavatra fa tahaky ny mifikitra amin'ny eritreritra taloha fony vanimpotoanan'ny Ady Mangatsiaka i Moriarty…. Ampidinina ambany ny fitaovampiadina rehefa vita ny fifidianana ny CA. Alohan'izay, tsy misy olona mametraka fitaovampiadina – na ny tafika Nepaley na ny PLA…….. Amin'ny toerana rehetra, isan'izany i Afrika Atsimo, Amerika Latina na Afovoany na Irilandy Avaratra, tsy misy amin'ireo antoko mifanandrina no mamela ny fitaovampiadiany alohan'ny farany, fitsipika politika…………..Efa eo am-pelantanan'ny sehatra tsy mainkina ny toekarena Nepaley. Sivy amby sivifolo isan-jaton'ny toekarena no anaty sehatra tsy miankina. Araka izany, tsy misy resaka fisintahan'ny fanjakàna, fa efa tsy miankina izy io, ho afaka hanana lalàmpanorenana vonjimaika isika.
Manana sosokevitra ho an'ny federalisma sy ny lalampanorenana vonjimaika ny Demokrasy Ho An'ny Nepal (DFN). Miresaka mombanà fitondrampanjaka vonjimaika, tafika vonjimaika, Parlemanta vonjimaika ary revolisionan'ny Aprily, Fifanarahan'ny Aprily ny DFN.
Ny DFN sy ny Samudaya dia samy manana sary lehibe avy tamin'ny Fifanarahana ANA, nomena anarana hoe ny hetsika Nepaley ngeza indrindra any ivelan'i Nepal. Niresaka momba ilay Indiana mpanoratra, Arundhati Roy, i Sarahana Shrestha avy ao Samudaya.
Nanontany izay zavatra tsara hatao ao anatinà demokrasia, izay voahitsakin'ny herin'ny miaramila ny fanoherana mitam-piadina ary ihomehezana sy ahilika ho amin'ny sisiny fotsiny ny fanoherana tsotra, namboraka ny fanantenany farak'izay kely ao amin'ny demokrasia i Roy…Mpitarika iray hamerina ny firenena iray avy any amin'ny am-polontaona maro no tsy maintsy ilaina
Manana lahatsoratra avy amin'ny Dr.Govind Shah ao amin'ny Fampandraisana anjara ara-tSosialy ao amin'ny Vondrom-piarahamonina Madheshi Amin'ny Fananganana Firenena ny Madhesi: Miara-Mijoro Isika. Lazain'ny Antony Sy Revolusiona fa tsara ny firesahan'ny Shinoa sy ny Maoista amin'izay. Miasa loha momba ireo Nepaley tafahitsoka ao Libanona ny Random Jottings.
Misy ampaham-baovao ao amin'ny BBC News Online mitondra ny lohateny hoe “Tafahitsoka sy raiki-tahotra anaty faritra misy ady”, izay mitatitra ny manjo an'ireo Nepaley tafahitsoka ao Libanona ary ny tsy fisian'ny fanohanana ho azy ireo avy amin'ny masoivoho Nepaley any an-toerana, ary ny tahotra ny ho faty any an-tany lavitra ny an'ny mpiasa Nepaley iray, Gopal Ghimire.
Tsy mbola very fanantenana toy izao mihitsy i Blogdai momba ny mety ho fahombiazan'ny resaka fandriampahalemana.
Hampitsahatra ny resaka fandriampahalaemana eo amin'ny izao sy Dashain ireo Maoista. Hilahatra amin'ny filozôfia Maoista avy hatrany i Madhav Kumar Nepal. Ho faty ao anatin'ny iray taona ilay zokiolona Girija Koirala. Handray ny toeran'ny praiministra i Sujata Koirala. Tsy hahavita hampanao fifidianana ho na inona na inona ny parlemanta Koirala amin'izao. Handeha sesitany i Paras, fa tsy ilay Mpanjaka. Ho avelan'ny RNA halain'ireo Maoista ny Governemanta izay vao hihetsika izy ireo. Hametra-pialana amin'ny maha masovioho Amerikàna azy ato anatin'ny 9 volana i James Moriarty. Tsy hihetsika amin'ny andrana fanonganampanjakans, habibiana na hetsiky ny Maoista ao Nepal i India. Hanampy amin'ny basy i Shina ary hanohana an-kolaka ireo Maoista….. Mahafinaritra eh? Nikapoka tsara kokoa noho ny ankamaroany i blogdai tamin'ilay departemanta vinavina, ka mitandrema ry Nepal, miala any ny korontana.